Business Archives - Page 2 of 2 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 12, 2017 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa qorsheynaysa daabacaada lacago adag oo rasmi ah inta lagu guda jiro sanadkan markii ugu horeysay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe 1991-dii. Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali […]
February 11, 2017 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qiimaha sarifka dollarka ayaa hoos u dhacay gudaha magaalada Muqdisho intii lagu guda jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen ganacsatadu. Halkii dollar ($1) ayaa gaaray sarif u dhaxeeya lix iyo […]
February 9, 2017 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa in sanadkan uu si adag hoos ugu dhaco iyadoo abaari ay ku dhufatay wax soo-saarka beeraha, sidoo kale saameyntu waxa ay si lamid ah u saameyn doontaa dhismaha […]
January 3, 2017 Abdi Omar Bile 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Warshada ugu weyn ee soo-saarta biyaha la cabo ee caagadaha ayaa laga furay magaalada Gaalkacyo shalay oo Axad ahayd. Saleebaan Cabdi Cali oo kamid ah ganacsatada reer Puntland ee shirkada oo magaceeda la […]
December 19, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada duulimaadka diyaaradaha ee Jubba Airways ayaa duulimaadyo cusub ka bilowday garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiisha Jubba Airways shalay oo Axad ahayd. Duulimaadyada cusub ayaa isku xiri doona […]
October 18, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada Amal Group ayaa xalay oo Axad ahayd kusoo bandhigtay magaalada Garoowe shirkad isgaarsiineed oo cusub oo ay hirgalisay oo lagu magacaabo Amtel. Munaasabada soo bandhigida ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala […]
July 27, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Bankiga Iftin ayaa xarun weyn ka furtay caasimada Puntland, Garoowe maanta oo Arbaco ah. Xaflada furitaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, wasiiro, xildhibaano iyo ganacsado. Madaxweynaha Puntland ayaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa qorshaynaysa lacag cusub oo rasmi ah in ay soo daabacdo sanadka soo socda bilowgiisa iyadoo dowlada rabto in ay ku badasho lacagaha been-abuurka ah iyo in kor loo qaado ganacsiga dalka […]